Bulshadu Waa Dhibaatada, Maaha Warbaahinta | Martech Zone
Shalay, waxaan maqlay sheeko weyn oo ku saabsan asxaabta iyo cadawga. Sheekadu waxay ku saabsaneyd sida ay aad ugu adag tahay inaad saaxiib yeelatid marka loo eego cadowga. Cadow waa lagu sameyn karaa daqiiqado gudahood, laakiin badiyaa saaxiibtinimadeennu waxay qaadatay bilo ama sannado in la abuuro. Markaad fiiriso warbaahinta bulshada, tani sidoo kale waa arrin… adiga ama ganacsigaaga aad wax fudud u qaban kartaan sida dhajinta farriinta xun ee internet-ka iyo nacaybka. Cadaawayaashu way xardheen.
Isla mar ahaantaana, istiraatiijiyaddaada inaad macaamiisha siiso war-celin dhexdhexaad ah oo aad siiso qiime iyaga ayaa qaadan kara bilooyin, ama xitaa sannado, ka hor inta uusan macaamilku qadarinin qiimaha iyo maamulka dadaalladaada warbaahinta bulshada. Xaqiiqdii, dadaalkaagu waligiis kuma horumarin karo saaxiibtinimo khadka tooska ah sida aad rajaynayso.
Aad ayey uga dhib badan tahay inaad saaxiib yeelatid marka loo eego cadowga.
Sheekadu kuma saabsana in aad khadka tooska ah ka gasho… dhab ahaantii waxay ka timid marinka baybalka. Uma dhahayo in aan ku dhiirrigeliyo fikrad kasta, kaliya inaan tilmaamo in dhibaatadani aysan ka bilaabmin baraha bulshada. Dhibaatadu waxay ku saabsan tahay dabeecadda aadanaha, maahan mid ka hadla arrimaha bulshada. Warbaahinta bulshada ayaa si fudud u bixisa kulan guud oo aan ku aragno arrimahan oo la soo saaray.
Markaan daawado Interwebs-ka oo weeraraya dad badan oo caan ah, siyaasiyiin iyo shirkado, runtii waxaan la yaabanahay sida xeeladaha wax ku oolka ah ee warbaahinta bulshada ay u ekaan doonaan mustaqbalka. Gurus-ku-sheegyaashu waxay ku wacdiyaan hufnaan waxayna dalbanayaan in dadka, hoggaamiyeyaasha iyo shirkadaha aan raacno laga heli karo khadka tooska ah… ka dibna madaxa ayaan ka saareynaa markay khalad galaan. Faa'iidooyinka ma sii wadi doonaan inay ka culus yihiin kharashyada?
Hagaag… Nolosha sidoo kale waxaan si fudud u sameysanaa cadaawayaal… laakiin nagama hor istaageyso inaan waqtiga gelino si aan u sameysano oo aan u ilaalino saaxiibtinimo wanaagsan. Way ka fududaan kartaa inaad cadow ka dhigato saaxiib, laakiin faa'iidooyinka saaxiibtinimadu aad ayey uga culus yihiin khatar kasta oo abuuri karta cadow.
Jul 1, 2013 markay ahayd 9:45 AM
Mawduuc xiiso leh laakiin qodobku ma bixinayo mala-awaal xal ahaan. Weli kor u qaadista arrinta way ku wanaagsan tahay iskeed. Tnx
Jul 1, 2013 markay ahayd 11:20 AM
Xal uma haysto - laakiin waxaan rajeynayaa inaan arko sida shirkadaha u hagaajiyaan istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada ama sida ay macaamiishu uga falceliyaan khaladaadka warbaahinta bulshada markii waqtigu sii socdo.